Page 165 – तपाईको अनि हाम्रो आवाज
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा इन्काउन्टर स्पेसलिस्टको उपाधि पाएका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) कुमोद ढुंगेलविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। रानीबारीमा भएको एक डकैती काण्डमा पक्राउ परेका एक अभियुक्त र डीएसपी ढुंगेलबीच लामो कुराकानी भएको पत्ता लागेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले ढुंगेललाई निलम्वन गरेको थियो। यो खबर आजको […]
एजेन्सी । सिन्दुर हालेर भित्र्याएकी पत्नीलाई अर्कै पुरुषसँग विदाई गर्नुपर्ने अवस्था कसैको जीवनमा सायदै आउला । तर, भारतको बिहारमा एक पुरुषको जीवनमा यस्तो स्थिति सिर्जना भएको छ। बिहारको भागलपुर जिल्लास्थित खिरीबाँध पञ्चायतको सालेपुर गाउँका राम (नाम परिवर्तन)ले आफ्नी पत्नीको बिहे उनका प्रेमीसँग गरिदिएका छन् भने उपहारमा अढाई वर्षीय […]
काठमाडाैं । भक्तपुरका रैथाने गौरव न्यौपाने विगत १० वर्षदेखि पोर्चुगल बस्दै आइरहेका छन् । आफू राप्रपा नेपालको समर्थक भएपनि कमल थापाको राजनीति गर्ने तरिका सही नभएको उनको दाबी छ । कमल थापाको मात्र हैन नेपालका सबै पार्टीका नेताको राजनीति गर्ने तरिका सही नभएको उनी बताउँछन् । युवाहरू विदेश पलायन […]
काठमाडौं । जारी १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा बिहिबार नेपालले सात स्वर्ण जित्यो । बिहिबार नेपाललाई स्वर्ण जिताउने मुख्य काम नेपालका महिला खेलाडीले गरे । सागको पाँचौ दिन नेपाली खेलीले पाँच स्वर्ण जिते । अझ महिला खेलाडीको स्वर्ण ऐतिहासिक बन्यो । पौडीको दुई सय मिटर फ्रिस्टाइलमा गौरिका […]
काठमाडाैं । निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले मन्त्रीको हैसियतमा सरकारी सुविधामा प्राप्त २ वटा गाडी अझैसम्म फिर्ता नगरेको पाइएको छ । मन्त्रीको जिम्मेवारीबाट हटाइएको २ साता बितिसक्दा पनि महासेठले सरकारी सम्पत्तिमा रजाइँ गरिरहेका हुन् । स्रोतका अनुसार महासेठले फिर्ता नगरेका २ मध्ये एउटा गाडी उनकी […]
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रियापछि स्वास्थ्यलाभ गरेर डिस्चार्ज भएका छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरस्थित मनमोहन कार्डियो थोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बिहीवार अपराह्न डिस्चार्ज गरेको हो । पेट दुखेपछि ओली यही मंसिर १० गते अस्पताल भर्ना भएका थिए । उनलाई एपेन्डिसाइटिस […]
काठमान्डौ । कोरियाली कम्पनि एसवाई प्यानलले( SY Nepal) आफ्नो उत्पादन शुरु गरेको छ । फेब्रिकेटेड भवन निर्माण सम्बन्धि सामान उत्पादन गर्ने कम्पनीले यसै हप्तादेखि उत्पादन शुरु गरेको हो । नेपालका बिभिन्न जिल्लामा कम्पनिबाट विभिन्न रंगहरुमा छाना तथा वाल प्यानलहरु उत्पादन शुरु गरेका छन् ।बिभिन्न रंगको छाना र वाल […]
काठमाडौं । अहिलेको लोकप्रिय रियालिटी शो द भोइस अफ नेपाल सिजन २ का गायिकाद्वय मेचु धिमाल र अञ्जु राना मगर सलनालमा कोरिया जाने भएका छन्। ओखलढुंगा सेवा समाजद्वारा आयोजना हुने 1974 AD को लाइभ कन्सर्टमा दुई गायिकाको पनि बेजोड प्रस्तुति रहने आयोजकले जनाएको छ। उक्त लाइभ कन्सर्ट सलनालको […]
काठमाडौं । न्यूज २४ टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज ४६५ औं एपिसोड हो । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा पनि विभिन्न विशेष रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ । १. खेलाडीले सागमा समेत राखेपको साथ पाएनन् ! काठमाडौं । १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अहिले नेपालमा जारी छ । यसको […]
काठमाडौं । गीत सार्वजनिक भएको छाेटो समयमै भिटेन (समीर घिसिङ) को नयाँ गीत युट्युब ट्रेन्डिङको नम्बर एक स्थानमा पर्न सफल भएको छ। आगामी एल्बम ‘सुपरस्टार’ एल्बमभित्रको पहिलो गीत ‘थाहा छैन’ले एक हप्ता नपुग्दै गीतले दश लाख ३८ हजार भ्युज पाइसकेको छ। उनको एल्बम यही डिसेम्बर २७ मा सार्वजनिक […]
काठमाडौं । १३ औं सागमा नेपाली पौडीका लागि बिहिबार ऐतिहासिक दिन बन्यो । सागको इतिहासमै गौरिका सिंहले नेपाललाई पहिलो ऐतिहासिक स्वर्ण पदक दिलाइन् । गौरिकाले दुई सय मिटर फ्रि स्टाइल विधामा नेपाललाई स्वर्ण पदक दिलाएकी हुन् । सातदोबाटोस्थित हिटिङ पौडी पोखरीमा गौरिकाले निर्धारित दुरी दुई मिनेट ०५.०६ सेकेन्डमा […]